Thursday September 26, 2019 - 10:55:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Howlwadeennada caafimaad ee ka shaqeeya isbitaallada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa walaac ballaaran ka muujinaya xayiraadda dhanka hawada ah ee dowladda Federaalka ay kusoo rogtay magaaladaasi.
Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ayay lasoo darista daawa yari baahsan kadib markii ay magaalada ka baaqsadeen diyaaradihii dawooyinka ka keeni jiray dalka dibaddiisa.
Agaasimaha guud ee isbitaalka Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay in bukaanno farabaan oo wax looga qaban waayay isbitaalka ay magaalada ku xiranyihiin islamarkaana ay aad uliidato xaaladooda caafimaad.
Dadweyne qaba baahiya caafimaad oo isbitaalka Kismaayo lagu daweyn jiray ayaa loo waayay daawadii ay ubaahnaayeen, sidoo kale diyaarado daawo ukeeni jiray Isbitaalka oo maalmaha Isniinta iyo Khamiista kasoo dagi jiray garoonka diyaaradaha magaaladaas ayaa ku xayiran magaalada Nairobi.
Go'doominta dhanka hawada ah ee dowladda Farmaajo ay saartay Kismaayo ayaa loo arkaa mid saameyn xun ku reebtay dadka rayidka ah, maamulka 'Jubbaland' ee Axmed Madoobe madaxda ka yahay ayaa ku guul darraystay in uu iska khafiifiyo cunaqabateynta uga imaanaysa dowladda Federaalka.